Kyaw Nyo Thway: ဂျနီဖာအက်နက်စတန် ဂွီလာမိုးမြင့်သူ သို့...ပေးစာ
ဂျနီဖာအက်နက်စတန် ဂွီလာမိုးမြင့်သူ သို့...ပေးစာ
ဒီးရားဖရန့်စ် ဂျနီဖာအက်နက်စတန် ဂွီလာမိုးမြင့်သူ
အိုင် သတိတရနဲ့စာရေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီလို ဒက်ဇန်ဘာ မနက်ခင်းမှာ ဟိုးအတိတ်က မင်းနဲ့အတူ မနက်ခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ရင်း ပျော်ခဲ့ကြတာတွေကို သတိရမိတယ်။ အိုင်ခန်နဲဗား ဖော်ဂတ်ယူ ဂျနီဖာာ….။
မင်းဆီငါစာရေးသာရေးရတာ အိုင်ဒုန်းနိုး ၀ှတ်ထူထဲလ်ယူ ပါပဲ။ နာ့ဒ်သင်းစပါ့ရှာယ် ထူဆေးယူ ပါကွာ။ ငါ့အကြောင်းနည်းနည်းပါးပါပဲ ပြောတော့မယ်။
တူဒေးမောနင်း မှာ ဘရိက်ဖတ်စ် အတွက် မြန်မာထရိတ်ဒီရှင်နော်ယ်ဖုဒ်ထ် ဖြစ်တဲ့ မုန့်ပျားသလက်နဲ့ မုန့်စိမ်းပေါင်း စားဖို့ အိုင် တို့ ဖန်မလေီ က ဒရောအတန်းရှင်းန် လုပ်ထားတာပေါ့။
ဘတ်တ် ဒါပေမယ့်လေ…အန်ဖော်ကျူနိတ်တလီး ပါပဲ။ တူဒေးမောနင်း ကျမှ မုန့်စိမ်းပေါင်းသယ်ရော။ မုန့်ပျားသလက်သယ်ရောက မထွက်ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဘရိက်ဖတ်စ် အတွက် ဘာစားကြမလဲ စဉ်းစားကြရင်းက မစားတာ အတော်လေးကြာပြီဖြစ်တဲ့။ နူဒယ်ဆာလက် ကို စားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေ။ ဒါနဲ့ အိမ်နားက ဈေးမှာရောင်းတဲ့ မစ်(စ်)မူမူ ရဲ့ ဆိုင်ကနေပဲ ၀ယ်ပြီးတော့ တစ်အိမ်လုံးစားဖြစ်တယ်။ သူ့လက်ရာကတော့ တစ်ကယ့်ကို အိတ်ဆဲလဲန့် ပဲ။ အရောင်းအာဝါ၀ပ်ဒ် မှာတော့ သူ့လက်ရာကို မှီတဲ့သူက ရီးရဲလ်လီး ရီးရဲလ်လီး ကို ရှားတယ်။ ရှီးစ်သယ်ဘက်စ်တ် ပဲး)။
ဘရိက်ဖတ်စ် စားရင်းနဲ့ ဖေားသေား က အိုင့် ကိုမေးတယ်။ မင်းရဲ့ အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ စကေးလ် ရော အင်ပရုဖ် ဖြစ်ရဲ့လားတဲ့။ ဖေားသေား ပြောမှပဲ အိုင် လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သတိထားမိတယ်။ အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ နဲ့ဝေးနေတာ အစ်စ်ဆိုးလောင်း ပါပဲ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မှာ ၀ရိုက်တင်းပိုအာမ်စ် ပဲ အရသာတွေ့နေတာလေ။ အခုအချိန် အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ အာထီခယ်စ် တွေကို တွေ့ရင်တောင် လောင်းထိုင်းမ်စ်နိုးစီး ဆိုပြီး ဂရီးထင်းစ် လုပ်ရမယ့် စထေးထပ်စ် ဆိုတော့လေ…။
အန်းနီးဝေးးးး,,အိုင်မတ်စ်ဘီ ထရိုင်းထ် စတာရီးရင်း အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ ထူ အင်ဖရု. ပါပဲ။ ဘတ်ထ် ပေါ့…ဆန်းမ်ထိုင်းစ် တွေမှာဆိုရင် ရီးဒင်း ကလည်း ခွန်ဖော့ရယ်ဘယ်လ် ဆစ်ကျူရေးရှင်န်း မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အဘစ်ထော့ဒစ်ဇီး ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ၊ ကလီးယား ရန် နိုက်စ်ဖီလင် ရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ ရီးဒင်း ကရတဲ့ ဖီးလင်းစ် က ရီးရဲလ်လီး ရီးရဲလ်လီး ကို အန်ဂျွိုင်းရေးဘယ်လ် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အစ်စ်ဂျပ်စ်မိုင်သော်စ့်. ပါပဲ။
ဘီဖောအာဖတာ ရက်စ်တ်ဒေး က ကမ်ဖြူထာ ခလပ်စ် ကအဆင်းမှာ .. ဖရန့်ဒ် တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ သူ့ အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ ရိုက်တင်းစခေးလ် က တော်တော်လေးကို စထေးလ်ဝိခ် ပါပဲတဲ့လေ။ တစ်ကယ်တမ်းကတော့သူလည်းပဲ စဖိခင်းစခေဲလ်း ကတော့ ဖဲားလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရိုက်တင်းစခေးလ် ကို မော အင်ဖရုဖ် ဖြစ်ဖို့တဲ့လေ။ သူက လည်းပဲ ကိုယ့်လိုပဲ ရိုက်တင်း ပိုအာမ်စ် တွေကို ခရေယ်ဇီ ဖြစ်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အိုင့် ထက်စာရင် သူကပိုပြီး အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ နဲ့ ယု့စ်ထူ ဖြစ်နေတာမို့။ ကိုယ်ကသာ မောရန်မော ဖရိုက်ထစ်စ် လုပ်ရမှာပါလေ။ သူက ၀ဲလ်နုန်း ဖြစ်တဲ့ ထရိန်နင် ခလပ်စ် တစ်ခုကိုတက်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ပြောတယ်လေ။
သို့သော်လည်းပဲ ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ အိုင်ဘလိဖ်ဖင် ဆပ်ဖ်စထယ်ရီ ပါပဲ။ ထရိန်နင် ခလပ်စ် တစ်ခုခုကိုသွားတက်ရင် ဂစ်ဗင်းဂ် ကများနေပြီး ဂိန်း က နည်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ဂစ်ဖန်ထိတ်ခ် က မညီမျှဘူးလို့ယူဆမိလို့ပါ။
ဒါပေမယ့်လေ ကိုယ်ရဲ့ အင်းစထရက်တင်းဂ် က အင်းဂလိစ်ချိခ်ျ အပြင်။ ဂရပ်ဖစ်အတ်ထ်ဒီဇိုင်း ကိုလည်း ဦးတည်နေတော့ခက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အော်ရီဂျင် ကိုက တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲ ဒရောအတန်းရှင်န်း လုပ်တတ်တာဆိုတော့လေ။ ရက်စ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကိုယ့်ရဲ့သွားမယ့် ထရန်းဒ် ကိုသေချာရွေးရမှပါပဲ။ ရက်စ်! အိုင်မတ်စ်ဘီ ချုစ့်မိုင် ထရန်း မိုင်ဆက်ဖ် ရူးဝါးလီး။
ရိရား ဖရန်ဒ့်…စာလည်း ဆိုးလောင်ဂ်း ဖြစ်သွားပြီ။ ထိတ်ခဲအောဖ့်ယူအာဆက်ဖ် နော်။
ဆီးယူ လိတ်ထား နော်။
Kyaw Nyo Thway: ဂျနီဖာအက်နက်စတန် ဂွီလာမိုးမြင့်သူ သို့...ပေးစာ - ဂျနီဖာအက်နက်စတန် ဂွီလာမိုးမြင့်သူ သို့...ပေးစာ
Wednesday, December 3, 2008 at 5:05 AM
ချစ်ခြင်း ခြေရာ at December 3, 2008 at 6:03 AM
အိုး အိုင်တော့ ဘာဆေးလို့ဆေးရမှန်းကို မသိတော့ အောင်ပါပဲ..ယူ့ လက်ခ်ထာ ကို ရိဒ် ရတာ အိုင် အမ် ဗဲရီး ၀မ်းဒါးအင် ဟက်ပီး ဖြစ်ရပါတယ်..။ ခယ်ရီ အွန် လို့ပဲဆေးရမလား ဗရာဗို လို့ပဲ ဆေးရမလား ..။ ဘယ်လိုပဲဆေးဆေး ပန်းကန်ပြောင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်..(အဲ ရောကုန် ပြီ )။ ဟောင်းအဲဗား...အိုင် ရီးယဲလီး အပရီ ရှီယိတ် ယူပါ..။ အနော်ကတော့ ဂျနီဖာ အင်နစ်စတန်ထက် ကိတ်ဘာကင်ဆေးလ် ကို ပို လိုက်ခ် တယ်လေ..။
ခင်လို့နောက်တာပါ အစ်ကိုရေ..ဆက်ပြီး မမြင်မတော်တာတွေ ဆုံးမနိုင်ိပါစေ။
SDL at December 3, 2008 at 8:52 PM
သက်တန့် at December 3, 2008 at 9:29 PM
ဂွပ် ဂွပ် ဂွပ်... :P
mirror at December 3, 2008 at 9:56 PM
Laughter,the best medicine.
ခေါင်ခေါင် at December 5, 2008 at 9:54 PM
လင်းလက်ကြယ်စင် at December 6, 2008 at 9:49 AM
မျက်လုံးတွေ ခလုတ်တိုက်မူးသွားပါတယ် :P ။ ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွက် မြန်မာစကားအသစ် ထွင်နေကြပြီ ထင်တယ် :)
တောသားကြီး at December 7, 2008 at 2:21 PM
ဘဲထီးဂွတ်ထပါတယ်ခင်ဗျား အိပ်ဇဲလင့်ဇ် အမေဆင်း (အမေ့တော့မဆင်းခိုင်းပါနဲ့ဗျာ မှားကုန်ပြီ) တတ်သလောက်လေးတွေနဲ့ မှုတ်သွားတယ် အင်းဂလိရှစ်လိုပါ (ပျော်လို့နောက်တာနော် အစ်ကို)
အိတာ at December 12, 2008 at 1:29 AM
စာရေး၊စာဖတ် နှင့် ဘာဘာညာညာများ